गृहमन्त्रीको बामदेव गौतमको दाहसंस्कार ! – Tharuwan.com
सुनसरीको दुहबीमा थारु आन्दोलकारीले गृहमन्त्री बामदेव गौतमको पुतला बनाई दाहसंसकार गरेका छन्। थारु आन्दोलनकारीमाथिको बर्बर दमनविरुद्ध गौतमको पुतला दाहसंस्कार गरेका हुन्।
त्यसलगत्तै प्रहरील् थारु आन्दोलनकारीमाथि दमन गरेको थियो। प्रहरीको लाठीबाट १५ जना घाइते भएका छन्। १२ जनालाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको संयोजक सन्तोष थारुले बताए। आन्दोलनकारीहरुले असक्षम गृहमन्त्री राजीनामा दे! प्रहरी दमन बन्द गर भन्दै नारबाजी गरेका थिए।